Andranomena -Talatamaty : Lozam-pifamovoizana, olona iray maty, sivy naratra mafy – Midi Madagasikara
Vous êtes ici: Accueil → Faits-Divers → 2019 → octobre → 3 → Andranomena -Talatamaty : Lozam-pifamovoizana, olona iray maty, sivy naratra mafy
Andranomena -Talatamaty : Lozam-pifamovoizana, olona iray maty, sivy naratra mafy
Redaction Midi Madagasikara 3 octobre 2019 0 Commentaire
Lozam-pifamoivoizana roa mahatsiravina no nitranga tetsy Avaratra Andrefan’Antananarivo, tamin’iny lalam-pirenena fahefatra iny omaly. Ny iray, fiara mpitatitra manao zotra nasionaly no nifaoka mpandeha an-tongotra tetsy Andranomena. Vokany ! olona sivy no naratra ka ny roa tamin’izay no voa mafy. Ny iray hafa, tetsy Talatamaty, lehilahy 35 taona no maty nitsoraka tao ambany fiarabe.
Tsy mampilaza marina ny loza rehefa ho avy. Tampoka tamin’ireo mpiandry taxibe tetsy Andranomena tokoa ny zava-nitranga. Fiara iray manao zotra nasionaly, handeha hianavaratra mantsy no nirafarafa, nandeha mafy tamin’iny lalana Digue, eny fa na dia teo aza ny fitohanana efa mahazatra efa sakafon’ny mponina andavanandro. Tao anatin’ny fandehanany mafy ity fiara ity no nivily tampoka. Nandona fiara iray avy eo nifaoka tsirairay ireo olona marobe nitangorona niandry fiara taxibe omaly maraina. Olona sivy no voafaokan’ilay fiara tamin’io fotoana io izay samy naratra avokoa. Roa tamin’ireo no tena voa mafy, araka ny tatitry ny mpitandro filaminana. Samy nentina novonjena tao amin’ny hôpitaly manarapenitra avokoa moa ireo naratra. Tao anatin’izany kosa dia tsy hita izay nalehan’ny mpamilin’ilay fiara nahavanon-doza. Mbola karohina moa ilehio hatreto, araka ny fampahafantarana nomen’ireo mpitandro filaminana, tonga teny an-toerana, nanao ny fanadihadiana.
Fa mbola omaly maraina hatrany, tetsy Talatamaty indray, lehilahy iray sahabo ho 35 taona no maty voahitsaky ny fiarabe. Raha ny voalazan’ny mpitandro filaminana sy ireo olona teny an-toerana nanatri-maso ny zava-nisy dia efa nivonona ny ho faty sy hanapitra ny androny mihitsy ranamana ity. Efa ela mantsy no nijery izay fiara mandalo, ary nisafidy manokana ilay fiarabe. Raha vao nandalo ity farany dia avy hatrany dia nitsoraka tao alohany izy. Mazava ho azy, tampoka ho an’ny mpamily ny zava-nitranga, ka na dia niezaka nijanona aza izy dia mbola voatetin’ny kodiarana ilay rangahy. Maty tsy tra-drano. Marihana fa mbola tsy fantatra ny mombamomba ity lehilahy namono tena ity. Hatreto mantsy, araka ny fanazavàna nomen’ny kaomandin’ny tobim-paritry ny zandary eny an-toerana, izay misahana ny raharaha, dia tsy mbola nisy havany tonga. Ny mpamilin’ilay fiarabe kosa dia voatery notazomina any an-toerana, noho ny fiarovana azy sy ilaina amin’ny famotorana atao.